Ndi ebike ọdịnihu nke mgbazinye igwe kwụ otu ebe? | ebike Shuangye
Mbido blog News Ndi ebi na ọdịnihu nke mgbazinye igwe kwụ otu ebe?
Datebọchị ： 2021-06-15 Categories ：News Nlele ： 1,632
Ọ bụ ezie na ọ nọ na America na Europe ihe na-erughị otu afọ, oke igwe kwụ otu ebe na-agbasa ngwa ngwa n'ofe ụwa.
Ihe bidoro na Seattle dị ka nnwale a gbaziri n'aka China agbasaala ruo obodo sitere na Los Angeles ruo Washington, DC Na ebe ndị ọrụ gọọmentị na-anwa ịhazi ụfọdụ okwu metụtara ọrụ ọhụrụ-igwe kwụ otu ebe na-aghọ mkpọmkpọ ebe na ebe a na-ekpofu ihe na Dallas, maka otu - ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ n'ihu na usoro na-esote na ọgba aghara na-adịghị akwụsị akwụsị: igwe eletrik eletrik.
Jump, mmalite nke Brooklyn, ghọrọ ụlọ ọrụ mbụ na-enweghị ọdụ iji wepụta e-igwe kwụ otu ebe mgbe ọ malitere na DC na Septemba. N’ọnwa gara aga, ọ meriri nkwekọrịta nke mbụ ịmalite e-anyịnya igwe na San Francisco. LimeBike gosipụtara e-bike nke ya n'ọdụ ụgbọ mmiri n'egwuregwu Electronics Show in Las Vegas n'afọ a. Companieslọ ọrụ ndị ọzọ, dịka Spin na Motivate, kwuputara ndị ọkwọ ụgbọ e-igwe n'otu oge. Ọbụna Uber wee banye na ihe ahụ, na-ekwuwapụta na ọ ga-enye ndị ọrụ ohere ịchọta igwe kwụ otu ebe site na iji ngwa ịgba ịnyịnya.
Ọtụtụ teknụzụ ọhụrụ na-eme ka netwọkụ e-igwe na-apụta. Mmepe na ngwa elektrọnik, dị ka laptọọpụ, akwalitela batrị Lithium-ion dị mma nke na-adị ọkụ ma na-ebu ebubo ogologo oge. Ọganihu na GPS na akara sel na-eme ka ọ dị mfe iji soro otu ụgbọ ịnyịnya ígwè gburugburu mpaghara metro. Ma n'ihi ịrị elu na-eto eto na Europe na Eshia, ihe ndị dị ka igwe mmetụta na motọ na-adịwanye ọnụ ala ma na-adịkwa elu.
"Kpọmkwem mmiri ndị dị na anyị anyịnya igwe ugbu a, ndị mmiri na-adịghị dị ọbụna a afọ na ọkara ma ọ bụ afọ abụọ gara aga," kwuru Ryan Rzepecki, Jump si CEO. "Anyị anyịnya igwe nwere a 40-mile nso na ha, nke na-eme ihe anyị na-eme nnọọ viable."
Ọtụtụ sistemu igwe kwụ otu ebe na-enweghị ebe nwere ntọala yiri ya. Ndị na-agba ịnyịnya na-ebudata ngwa ekwentị, nke na-enye ha ohere ịchọta igwe kwụ otu ebe dị na mpaghara ha. Mgbe ahụ, ha na-ahọrọ igwe kwụ otu ebe, tinye nọmba ID ya ma ọ bụ swipe koodu QR, ma pụọ, na-agbachi ọzọ ebe ọ bụla kacha adịrị ha mma. Gbakwunye e-igwe kwụ otu ebe na-eme ka usoro ahụ dị ntakịrị karịa ka ọ dị na mbụ: Maka ụgbọ mmiri eletriki ya, LimeBike na-akwụ $ 1 ụgwọ maka njem na mgbe ọzọ dollar maka nkeji 10 ọ bụla eji, nke ruru $ 4 maka njem elekere ọkara. Ngwongwo ya na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-atụle naanị $ 1 ​​maka oge 30 ọ bụla ịnya. Jump ebubo $ 2 maka ọkara ọkara awa na 7 cents maka nkeji ọ bụla.
Enwere ụfọdụ ihe ịma aka n'ụdị a, n'ezie, gụnyere otu esi achọpụta na anyịnya igwe dị ebe ndị mmadụ chọrọ ha. Jump na-adabere na ndị otu ala iji dozie usoro ya. "Akụkụ dị ukwuu nke arụmọrụ ahụ bụ ụmụ okorobịa na vans na-achịkọta igwe kwụ otu ebe, na-arụ ọrụ igwe kwụ otu ebe, ma na-agagharị igwe kwụ otu ebe dịka ọ dị mkpa," Rzepecki kwuru. GPS na akara ekwentị na-enye ndị otu ahụ ohere ịke ịnyịnya ígwè anyị na-agabeghị ma weghachite ha na mpaghara a ma ama.
Tags:mgbazinye igwe kwụ otu ebe
Mbụ: Nabata na Shuangye 129th Online Canton Fair
Next: Ngwa Bafang Mid Drive maka igwe eletriki eletrik DIY